SAYID MAXAMED IYO DARAAWIISH | News From Somalia
Tag Archives: SAYID MAXAMED IYO DARAAWIISH
TAXANAHA TAARIIKHDA:-Taariikhda Colaadeed ee soo jireenka ah ee Somalia iyo Ethiopia.
Mahad balaarani waxay u sugnaatay Allah abuuray koonka, taagayna cirka iyo dhulka tiir la’aan nabadgalyo iyo naxariisi dushiisa ha ahato Nabigiisa Muxammed.
Intaa kadib run ahaantii ahal uma ihi qoraalka, khibrad iyo waayo aragnoma igu filana uma haysto qoraalada caynkan oo kale ah hase ahaatee waxaa igu kalifay in aan fikradayda daciifka ah iyo aqoontayda yar aan ku biiriyo walaalaha kale ee aanan u dhuun daloolin taariikhda ama waaqica dhabta ah ee kajira Geeska Afrika gaar ahaan Somalia iyo loolanka soo jireenka ah ee ka dhexeeya muslimiinta geeska afrika(Somalia) iyo masiixiyad geeska Africa(Eithopia).
Si kastaba ha u noqotee loolankaasi wuxuu soo maray marxalado kala duwan, oo ay igu dambaysay marxalada uu marayo dalka iminka, hadaba arimahaa oo isbiirsaday iyo xaalada uu ku suganyahay dalkayga hooyo ayaa igu dhaliyay in aan wax ka qoro taariikhda cadaawadeed ee u dhaxaysa Somalia iyo Ethiopia ama siraaca diineed ee geeska afrika oo ay kala matalaan labadaa dal ee aanu soo xusnay.
Hadaba somalidu waxay ku maahmaahdaa geeridii laga sheegay galbeed gondahaada ka day, dad badan ayaan ku baraarugsanayn waxa uu salka ku hayo dagalka ka aloolsan gayiga geeska Africa oo aaminsan in uu yahay dagaal qabiil ama mid siyaasadeed balse ay hada u cadaatay waxa uu yahay dagaalku, kadib markii ay ku baraarugeen tankiyada xabashida oo dul abaabaya caasimadii Somalia.
Sidaa aawadeed waxaan halkan kusoo bandhigi doonaa bilowgii colaada Somalia iyo Ethiopia iyo heerarkii ay soo martay, run ahaantii mowducani waa mid ahmiyad gooni ah xambaarsan ahna mid aad u balaaran una baahan in lagu bixiyo wakhti dheer iyo mudaalaco, suurtagalna ma aha in lagusoo koobo qormo ama qormooyin ee waa mid u baahan in lagu qoro dawaawiin .
Hadaba maadama aysan suurtagal ahayn in lagu soo koobo mowduucan maqaal ama dhowr maqaal, waxaan doorbiday in uu noqdo mid taxana ah si ay uga bogtaan aqristayasha sharafta leh una helaan xaqiiqda dhab ah ee ka dambayso cadaawadaa.
Boqortooyada Xabashidu waxay ahayd boqrtooyo weyn, xiriir wanagsana la lahayd. boqortooyadii Roomanka ee xakumi jirtay inta badan Europe, qaybo badan oo kamid ah Asia.
Waxaa hoos tagi jiray Xabashida dalka Yamen, waxyaalaha lagu xusuusta waxaa kamid ahaa weerarkii uu ku qaaday Abraha kacbatul musharaf uu Allaah ku sheegay quranka, kuna halaagay Abraha iyo wixii uu watay.
Hadaba markii lasoo saarayay Nabi Muhammad S.C.W. Dhulka xabashida waxaa xukumi jiray boqorkii Muslimay ee Najaashi. Sida aan wada ogsoonahay diinta Islaamku waxay soo gaartay Somalia hijaradii koowaad ee asxaabtu ay usoo haajireen dhulki la oranjiray dhulkii Xabishida , waxay kasoo dageen sida lasheego marsadii Zaylac ee Somaliyeed, tankale dhulkaa waxaa ku nolaa qowmiyado fara badan oo ay kamid tahay Somali,Sidaamo,Canfar,Amharo,Tigree,Oromo,Gaalo, Bani Shangul oo dhamaan ahaa dadkii daganaa dhulka Xabashida .
Qorayaasha reer galbeedku waxay ku andacoodaan in Ethiopia ay tahay Christianka geeska afrika, diinta Christinkuna ay gartay bilowgii soo saaris Jesus.
Hadaba su,aasha is weydiinta mudani waxay tahay Islaamka ka hor diimihii laga aaminsanaa dhulka Xabashida?
Adwer Olandrof wuxuu ku sheegay boogiisa layiraahdo “Ethiopians”( kala saaristii diinta iyo dowladnimada “ka hor fiditaankii diinta Christina, dadkii ku noolaa Ethiopia waxay u qaybsanaayeen kuwa aaminsan caqiidada mosame ama diintii mouse iyo kuwa caabuda arwaaxda (Holy Ghost), sidaa darted aad ayay ugu adkaatay diimihii islamka iyo christiankuba in ay si sahlan ugu faafeen, sidoo kale waxay dhibaata ka soo wajahday dadkii laadiiniga ahaa(cawaan)”.Wuxuu kale uu yiri ‘jiritaanka diimeed ee Xabashi wuxuu ahaa mid uu mugdi kujiro wixii ka horeeyay qarnigii 4aad ee miilaadiga, Ethiopia waxaa laga caabudi jiray jinka,geedaha,qoraxda iyo cirka).Dhanka kale waxaa lagu turjumay booka Injiilka luqadii tigreega qarnigii 5aad ee miilaadiga,kadib markii ay soo gaareen eithopia wufuud ka socotay kaniisadihii galbeedka kuwaas oo dhisay macaabid iyo meelo lagu faafiyo diinta masiixiga.
Dowladii Islamka Zaylac ee somaliyeed.
Ummadda Somaliyeed run ahaantii waxaa lagu fuliyay qaacidadii ama oraahdii uu yiri Hitler (Hadii aad doonaysid in aad dishid bulsho dil marka hore taariikhdooda) waxaad moodaa in hadalka uu saameeyay ummadda somaliyeed kadib markii ay soo wajaheen hagardoomooyin,dagaalo badan oo kaga imanayay gumaystihii iyo acdaadii islaamka kuwaas oo qariyay taariikhdii dhabta ahayd ,juqaraafigi iyo siyaasadi, waxayna soo saareen dhalin aanan garanayn dhaqankii,taariikhdii uu lahaa dalkoodii hooyo,garaadkooduna oo ku simanyahay taariikhdii uu qoray gumaystuhu qarnigii 20aad xiliyadii isticmaarka,waxaa layaab ah hadii aad ku tiraahdid mid kamid ah dhalintaa caasimada ethiopia ee addisababa waxaa laga xukumi jiray Zaylac ,ithopiana ma aynan lahayn ee waxay qabsatay xiligii boqorkii mililik ama minilik sanadkii 1893, ama aad ku tiraahdid waa qayb kamid ah dhulka somaliyeed ee ay eithopia gumaysato , wuxuu moodayaa dhalanteed halkadhalinta ithopia lagu ababiyo taariikhdana loogu dhigo in eithopia ay iska leedahay lagasoo bilaabo gacanka cadan ilaa suudaan oo aanay jirin wax Somali layiraahdo,hase yeeshe maanta waaba ka daroo dibi dhal ,oo waxaa yimid qaar sheeganaya siyaasiyiin ama mas,uuliyad oo kusoo hogaanshay dalkii cadowgii soo jireenka ahaa ee umada somaliyeed , si xishood la,an ah ugu hadaaqaya ,hadalada ku dhisan axmaqnimo oo oranaya waxaanu nahay dad walala ah,run ahaantii waa wax laga yaqyaqsado ,lakiin taariikhda ayaa xusi doonta ninkii baal dahaba kagalay halganka iyo kii calooshiis u shaqaysta ahaa, lakiin umad waliba waxay leedahay rag u istaago xuriyadeeda iyo jiritaankeda, somaliyana way joogaan wayna joogi doonan Allah idinkiis .
Hadaba u kaalay meelihii ay xukumi jirtay dowlada zaylac ee somaliyeed iyo imaaradaha hoos imaan jiray.
Imaaradii islamiga ahayd ee “Eifaat” waxay ahayd imaarat xakunto dhulka manta loo yaqaan Shaawa , waxayna dhacdaa woqooyiga addisababa 30km, ka hor inta aneey qabsan gumaystihii Amxaarada bilowgii qarnigii 17aad ee miilaadiga, kadib markii la jabiyay ciidamadii muslimiinta iyo geeridii geesigii weynaa Axmed ibraahim gureey,taa oo ka dhalatay markii ay weerer aad u xoog badan ku soo qaadeen macatab u dirirkii (salibiyiintii) naftood hurayaasha ahaa ee uu soo diray Pop Scander ee uu dambi dhaafka u balan qaaday ee kayimid Europe una hiilinayay Xabashida ,markii ay qabsadeen waxay tirtireen dhamaan ,raadadkii islaamka ,masaajidadii, macaahidii quran, ayagoo ku badalay kaniisado iyo macaabid ,sidoo kale waxay gumaaday dhamaan dadkii ku noolaal deegaankaa oo kaliya ay ka baxsadeen dad fara ku tiris ahaa ee u cararay magaalooyinka jaarka la ahaa imaaradaa, sida ay ku sameeyeen dhulkii Andale’s ama halka hada loo yaqaan spine iyo Portugal oo ay gabi ahaanba baa bi,iyeen raadad islaamka ee kajiray 10 qarni.
Marki ay la wareegeen imaaradaas waxay ka aas aaseen boqortooyada shaawa ee christianka ahayd waxay badaleen dhamaan magacyadii magaalooyinka iyo raadadkii ismaalmka.
2. Imaaradii Dawarow waxay dhacday woqooyiga Baali daanta wabiga, waa dhul beeraleey ah walina waxa dago dad Somali ah.
Saldanadii Araabiini ama alabiini labadaba waa lagu sheegay bookta taariikhda, hase ahaatee magaranayo halka ay dhacdo magaaladan lakiin waxaa la rumaysanyahay in ay magaalada abbo, waxayna iskugu jireen dad qodota ah iyo raacato.
Saldanadii Sharkha waxay dhacdaa saldanadaasi bariga abbo, dadka maglaada waa dad lagu sheegay dad culuma ah jecelna diinta Islamka.
Saldanadii Baali waa saldanadii ugu wayneed dowladii zaylac, waxay macruuf ku ahayd wax soo saarka sida suufka, bunka, dharka, waxayna ahayd dhul beeraleey ah, waxayna kamid tahay magaalooyinka cilmiga loo aado geeska afrika, waa magaalo fiqhi iyo luqada .
6. Saldanadii Daarow waxa lagu sheegaa in ay ahayd saladanadii ugu taagta darayd ee dowlada zaylac.
Saldanadii Caadil, saldanadaas kama hayo wax fahfaahin ah, bookta taariikhdu kaliya waxay xuseen magacaa kaliya lakiin waxay ahayd imaarad kamid ah zaylac.
Saldanadii HADYA waxay dhacdaa koofurta eiifaat waxana xukumi jiray suldaan kaanim oo la Oran jiray jaad, suldaankii ugu xooga badnaa wuxuu ahaa suldaankii ugu xooga badnaa ee soo mara imaaradaas,sida la sheego waxaa in ay dhacdo deeganka ay daganyihiin dadka gambeelaha iyo joodiile, dadkaas oo aha dad walaalo la ah somalida waxana lagu kala magacaaba aboow,waryaa,aykaa.
Saldanadaas waxaa ka soo baxay rag ay taariikhdu xustay geesinimadooda, dagaalyahano ah sida geeska weynaa ee u gargaaray diinta islaamka Jamaaluddin Mohammed sacduddin al zaylaci isagoo difaacay marki ay soo wareertay boqortooyadii tigreega jab lixaad lehna u gaystay ilaa uu dilay boqorkii isxaaq ee ahaa boqor kamid ah kuwii ugu waynaa.
Isku dhicii ugu horeye ee Islaamka iyo Christianka ee geeska Africa.
Sida aan lawada socono dagaalka u dhaxeeyay mujtamacadakii Islamka iyo christianku ee wakhtigaa ma uunan ahayn mid ku kooban dhul cayiman ee wuxuu ahaa dagaalka ku socday hab tartan ama loolan diineed si loo kasbado dadkii cawaanta ahaa ee ku noolaa dhulkaa. Islam wuxuu doonayay in dadkaa laga saaro mugdiga, jahliga iyo gaboodfalka loona daadihiyo cadaalad iyo sinaan,halka christianku uu doonayay adoonsiga ,tagri falka dhac,boob iyo in kan xooga lihi uu qaato kan taagta daran xaqiisa, xeerkoodu wuxuu ahaa kan duur joogta .
Hadaba dadkii cawaanta ahaa ayaa la dhacay cadaalada iyo wanaagii ay xambaarsaneyd risaaladii islaamka dabadeedna isu badal Muslimiin taas oo caro galisay christiankii, dabadeedna waxaa bilowday dagaal military iyo mid siyaasadeed oo u dhaxeeya labadii awoodood oo ay kala hogaaminayeen Imaaradihii islamka ee Zaylac, harar, shaawa, eyfat (Adissababa) ee dhulka somaliyeed iyo boqrtooyadii christianka ahayd ee Axmaara ee katalin jirtay buuraha sare ee dhulka eithopia.
Dagaalkaa wuxuu si toos ah u bilowday kadib markii ay burburtay dowladii Aksomia ee tigreega ahayd, taa waxay keentay dhalashadii imaaradi Amxaaro ee dhulka buuraha sare ee eithopia, taas oo markii dambo ku fiday ilaa dhulka tigreega, taana waxay sababtay in ay is dhaxgaleen dhaqamadii, luqadahii amxaari iyo tigreega ilaa markii dambe laga qoray buug kulminaya luqadahaa laguna magaacabay( jacaz) taas oo noqotay luqada cusub ee dowladaa, markaas ayay bilaabeen qolooyinka faafinayay masiixiyada in ay ku fidiyaan qowmiyadaha kale ee cawaanta ahaa iyo in ay ka hortagaan horomarkii iyo faafidii diinta Islaamka ee Ethiopia.
Qaybtii 2aad (Taariikhda colaadeed ee soo jireenka ah ee Somalia iyo Ethiopia.)
Sida aan ku soo xusnay qoromadeenii hore loolankii u dhxeeyay labadii quwadood oo ay kala matalaan dowladii somaliueed ee zaylac iyo boqortooyadii xabashida (amhaara iyo tigree), wuxuu ku bilowday isku dhac diineed, taas oo keentay in uu noqdo dagaal balaaran oo dhinacya badan taabanaya.
Hadaba isku dhacyadaa waxaa sababay arima badan oo ay kamid tahay kala duwnaashiyihii xadaarada iyo diinta, maxa yeelay dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa geeska Africa iyo dhulkii laga xukumi jiray zaylac, waxay ahayeen dad haysta ilbaxnimo islaami ah oo ku dhisan cadaalad, sinaan,xuriyad iyo dhaqama aad u wanaagsan, halka ay ahayeen dadkii ku hoos jiray boqortooyadii xabashida, dad cawaan ah dulman, oo kujiray adoonsi, waxay sheegaan dadka wax ka qoro taariikhda Africa, in adoonta ugu badan ee lagu kala iibsanjiray suuqyadii caalaamka wixii ka horeeyay qarnigii 7aad ay ahaayeen dadkii hoos imaanjiray xukunkii boqortooyada xabashida.hadaba qoromadan waxaan uga hadli doona isbarbardhig labadii xadaradood iyo wixii laga qoray.
Isbarbardhigidii heererkii ilbaxnimo ee dowladii Islamic ee Zayla iyo boqortooyadii xabashida.
Mudo aad u fog ayay Xamiitiggi Geeska Africa (Somali, Oromo, Sidaamo iyo Cafar) iyo xeebaha Afrikada Bari xiriir ganacsi la lahayeen khooriga Persia, Koofurta dalka Carbeed, India, Indonesia iyo Chine oo raadreebya badan laga helay.
Inbu batuuta oo sahan ku maray zaylac sanadki “1331’ miilaadiga, kitaabiisa “Alcajaaib al-asfaar”ku sheegay “Waa magaalo madaxda barbariga (Somali) oo dadka Dagan ay Muslim yihiin, xoolohooduna yihiin geel iyo ari waana magaalo saylad balaaran leh oo qiima leh” saidoo kale wuxuu socodkiisaa ku tagay muqdisho isagoo la kulmay boqorkii saldanadii muqdisho Abu shawaar Sheikh Abuubakar Cumar Hiloowle,isgoo ku sheegay dadkii daganaa halkaas dad ilbax ah xadaarad wanaagsana leh,wuxuuna sultankii ku tilmaamay in uu ahaa imam caadil ah dadkiisuna ay aad u jecelyihiin.
Hadii aan ku samayno isbarbardhig labadii xadaaradood waxa inoo cadaanaya in ay ahaayeenn kaaf iyo kala dheeri, maxaa yeelay dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa Zaylac iyo dhamamn geeska Africa waxay ahayd noloshoodu mid aad u sareysa,hadii ay ahaan lahayd xaga Handasada sidii ay u dhisan jireen guryaha,xaga ganacsiga,waxbarashada iyo caafimaadka .
Waxaa taa kuu cadaynaya hadii aad dheehatid magaalooyinki waa weynaa ee somaliyeed sida Zaylac oo ahayd caasimadii dowladii zaylac,harar oo hoos imaanjirtay Zaylac,Muqdisho,Baraawe,Barbara,Marka iyo Cadil.waxay ahaayeen magaalooyinka ugu waaweyna geeska Africa .
Waxay ku tilmaameen qorayaashii iyo dhulmareenadii muslimiinta ahaa nolasha dadkii ku noolaa magaalooyinkaas iyo xukaamtoodiba nolol aad u sareysa.
Hadda u kaalay Ibnu Fadlu-llaah Al-cumari, Al-qalashqaandi, Almaqriizi, Al-idriisi, Al-yacquubi iyo Ibnu-Batuuta “oo ka sheekaynaya magaalooyinka somaliyeed iyo dakii ku noolaa,waxay sheegeen in ay ahayeen magaalooyin aqooneed oo inta badan aad looga ixtiraamo dadka cilmiga leh gaar ahaan culumada, sidoo kale waxay caan ku ahaayeen qudaat(Judges), dhanka boqorada waxay ku sheegeen in boqorku, uu ku fariisanjiray korsi aad u sareeya oo ka samaysan bir lagu xardhay dahab iyo qalin,halka ay umarada kale fariisanjirtay hareeraha boqorka ,sidoo kale waxay tilmameen labiskii ay qaadan jireen boqoradaa oo ay ku tilaamen in uu xiranjiryay boqorku Taaj aad u quruxbadan laguna naash naashay xariir taas aad u quruxbadan, halka madaxda kale ay xiranjireen dhar suuf ka samaysan oo lagu xardhay xariir,halka dadka kale ee shacabka ah ay xiranjireen dhar ka samaysan suuf aad u quruxbadan.
Sidoo kale waxay sheegeen taariikhyahandaasi sicirkii cuntada lagu kala iibsanbjiray suuqayada magaalooyinka Islamic ah waxay sheegeen in 3o rodol ee hilibka ah la siisanjiray 2dirham, waxaa kale oo magaalooyinka wax lagu kala iibsanjiray dahabka iyo qalinka”.
Dhanka kale dhalintii reer Zaylac waxay wax barsho u aadi jireen magaalooyink cilmiga sida Maka,Madiina,Qaahira,Dimishqi iyo Yemen ayagoo ka baranjiray Fiqhi, Xadiis,luqada iyo culuumta kala duwan,sidoo kale waxaad arkaysaa in wadamadaa aanu soo xusnay ay meelo gooni ah ay u cayimi jireen ardada ka timaada zaylac ama dhamaan dhulkii xeebaha ee somaliyeed. Syria tusaale ahan waxaa jiray qasri wayn oo lagu saacidi jiray dadkii ka imanajiray Sudan iyo Zaylac,halka Qaahira azhar ay u cayintay meel la dajiyo ardadii ka imaan jirtay Zaylac waxaana lagu magaacaabi jiray uruqatu Zayaalica.
Waxaa intaa dheer Zaylac waxaa ka soo baxay culumo aad u waawyn oo manta kutubtoodu ay marjac u yihiin fiqhiga iyo xatiithka sida:
Cabdullah Ibnu yuusuf Ibnu Mohammad Al Zaylaci, wuxuu iska leeyahay kutub layiraahdo “Nasbu-rraayah Li- axaadiith al hidaayah” wuxuuna ahaa xanafi, kitaabkaasi wuxuu ka mid yahay kutubada la ictimaado xaga axnaafta ama dhamaan kutubada xadiithka, sidoo kale ardaydii shikha waxa kamid ahaa Ibnu xajar- al casqalaani oo ah shaarixa kutubka layiraahdo “Fatxul baari”.
Wuxuu dhintay shiikhu sanadkii762 hijriga.
Fakhruddin Cusman Ibnu Cali Al-Zaylaci. Kutubtiisa waxa kamid ah, kitaabka layiraahdo “Tabyiinul xaqaa-iq fii-sharxi Kanzu al- Daqaaiq”, waa kitaab aad u qiima badan oo fiqhi ah.
Carab Faqiih, waa qoraagii Imaam Axmed gureey wuxuu qoray kutubka la yiraahdo “Futuux Al-xabasha” waa booga kaliya ee loogu noqdo taariikhdii muslimiintii zaylac iyo dagaaladii ay lagaleen christiankii xabashida iyo Portugal.
Waxaa halkan inooga cadaaday in dadka somaliyeed ay yihiiin dad soo jireen ah oo leh taariikh aad u fog.
Carabtu waxay xeebaha Afrikada Bari ay aqoon u laheyd tan iyo waayo fog waxayna aad wax uga qortay heerka ganacsiga ee magaalooyinka xeebaha iyo dadkii deggenaa dhaqankiisi.
Waxaa xusid mudan ineey carabtii qarniyadii dhexe ee miilaadiga wax ka qortay dalka Somalia waxayna u taqiin dalkii beberigaa ama barri-alcajam walina waagaa sooma ifbixin magaca Somalia.
Qoryaashi Islaamka ee wax ka qoray dhulka somaliyeed iyo guud ahaanba Geeska Afrika waxaa kamid ahaa: Alyacquubi, Ibnu idriis, Yaaqu al xamawi, Ibnu batuuta, Ibnu khalduun, Ibnu saciid, iyo qaar kale oo aad u badan wallow aynan somalidu wax tixraac ah ku samayn.
Hadaba ilbaxnimadii xabashida oo aad u hooseysay markii aad dheehatid nolashii ay ku noolaayeen xabashidu, waxay kor isii kicisay colaadii iyo dagaalkii u dhaxeeyay iyaga iyo muslimiintii Zaylac.
Waxaa dabka ku sii shiday colaada mustawihii ay maraysay xadaaradii dowladii zaylac dhanka maadiga iyo dhanka moralka intaba, iyadoo ilbaxnimadii dowladii zaylac ay ahayd mid la hana qaaday horamarkii barigaa ay ku tilaabsadeen wadamadii muslimiinta ah sida Iraq, Syrian, Magolis iyo Xijaaz,ayadoo zaylac iyo muqdisho ay noqdeen labada magalo ee ugu saraysa xaga ganacsiga ee Geeska Africa .
Hadaba waxaa inoo cadaynayaa xadaaradii xabashidu heerka ay maraysay, qoraaga weyn ee Almaqriizi oo isagu sahan ku maray boqortooyada xabashida iyo waxii uu ka qoray.
Wuxuu ku sheegay Kitaabkisa “Al-ilmaam” Xabashidu waxay daganaayeen guryo laga sameeyay coosh, harna looga dhigay soda ama maqaarka lo,da,waxayna ku cunayeen hilibka lo,da qayriin, isagoo hadalkiisa sii wato ayuu yiri , wuxuu ii sheegay ruux arkay Sayf orcad “wuxuu ahaa mid kamid boqoradii xabashida wuxuuna kamid ahaa usradii Sulaymaniinta ahayd ee xukumi jirtay xabashida, wuxuu xukumayay 1382 ilaa 1411 miilaadiga” in uu arkay isagoo cunaya hilib qayriin ah oo laga soo jaray neef nool oo lo, ah , sidoo kale wuxuu yiri waxaan indhahayga saaray nin cunaya digaagad nool oo qaylinayso”, kafiiri bage 2,3 ee kitaabkaas.
Waxaa taageeraya tilmaaha uu sheegay maqriizi taariikh yahano booqday isaga kadib, ha ahaadeen Muslimiin ama Christian ajaanib ah.
Xiimi oo booqday bartamihii qarnigii 11aad ee hijriga ama qarnigii 17aad ee miiladiga, wuxuu ku sheegay kitaabkiisa “Siiratul xabasha, bage 99″ isagoo tilmaamaya qalcadii uu ku noolaa boqorkii xabashida wuxuu yiri dhamaan guryaha boqortooyadaasi waxay ahaayeen acshaab ama ulo, laga soo jaray dhirta”.
Xiimi kadib, waxaa yimid dhulmareenkii Scottish ahaa James biros oo booqosho ku tagay xabashida sanadki 1183 hijriga ama1769 miilaadiga, wuxuu ku noolaa 3sano, isagoo ku xanuunsaaday, kadib markii uu la qabsan wayay dhaqamadii xabashida, wuxuuna tilmaamay sida ay xabashidu, u malafsanjireen hilibka qayriinka ah gaar ahaan hilibkii lo, da, waxayna dhaayihiisu soo arkeen sida ay hilibka uga siibi jireen jirka neefka lo,da oo nool,dabadeedna ay u cuni jireeneen sidii dugaagi.
Sidoo kale waxa tilaamay arintaa Saadaq baasha Alcadami kadib markii uu booqday isna dhulkii xabashida ee buuraha sare qarnigii tagay.
Hadaba waxaa inoo cadaatay sugnaashiyaha hadalkii uu soo tabiyay Almaqriizi afar qarni kadib.
Dowlada xabashidu maynan ahayn kaliya mid ku liidato xaga nolasha ee waxay aad uga hooseysay dhanka maamulka, dhaqaalaha, dagaalka, dowladihii dariska la ahaa gaar ahaan dowladii zaylac.
Hadaba eeg Almaqriizii oo markale tilmaamaya qarnigii 9aad ee hijrada ama qarnigi 15aad ee miiladiga, wuxuuna yiri “waxay ahayd saldanadii Isxaq daawuud,taas oo maqriizi ay isku wakhti ahaayeen iyo boqrtooyadii Abihii hamajiyiin (juhalo) anan waxba qorin waxna akhrin,wuxuu yiri ma ayna lahayn wax diiwaan,tartiib iyo qanuun intaba .
Guntii iyo gunaanadki, akhristoow hadii somaalidii barigaa ay xabashidii ku khasbeen in ay hilibka qayrinka ah cunaan ama digaagadaha nool ay dufta ku liqaan baqdin ay ka qabeen, in Axmed gureey iyo colkiisi galaaftaan, kuna khasbeen in ay buuraha miciin bidaan, kana zuuliyeen in ay jadiinka mariyaan wax bisil.
Hadaba hadii aad gacanta u gashid caruurtii aabayaashood sidaa loo galay, laguna soo barbaariyay cadowtooyada somaliyeed ama aad isu dhiibtid? maxaad ka filan kartaa? Waxaan u malaynayaa in su, aashaas jawaabteeda cidna gibil ka saarnayn, mirihii kadhashay cadow lasoo dhawaystana, in ay maantaba soo ifbaxeen walina aneey faanoole fari ka qodneeyn. Waxaa intaa dheer ninka aaminsan in ethopia ay ka shaqaynayso maslaxad umada somaliyeed wuxuu lamidyahay Nin abeeso farqaha ku wato.
Horay ayaa loo yiri “Axdi malaha ethopia lagu aaminaaye waa abris iyo abees afka kala hayoo ubad iyo caruur oday iyo haween waxii uu arkaba alamsiinayoo, anaguna hadii aan nahay Islam aayeheenu waa umadyahay midnimo, arligana angaa iskaleh ethiopiana ma ogolin”.
Hase yeeshee waxaa jira rag talo ku gooyay geddina isku raacay in ay geeri iyo nolo ka xigaan gumaysiga, marka Allah waxaan uga rajaynayaa in uu guuleeyo.
1. “Wathaaiq cani somal, xabasha, irateria” waxaa qoray Axmed barkhad maaxi”waa qoraa somaliyeed.
2.Alcilaaqatu-siyaasiya bayna muslimi al-zaylac wannasaara al xabasha”.Dr Rjab Mohamed cabdul-xaliim.
3.The Ethiopian, an introduction to country and people” waxaa qoray Ulenderdorff (Edward).
4. “Futuuxul xabasha” Carab faqiih.
5. “Tuxfatunnadaar fii qaraaib al amsaar” Ibnu batuuta.
6. “A somaal wadanan washacban.” Mohamed cabdul muncim.
7. “Duwal fii sharqi ifriiqiya (Somali, harar)”Dr.maxamed muctasim.
8. “Tuxfatul awfiya limasiirati altaxriir, waltacriib liqarni al-ifriqiya”.waxaa qoray Ibraahin Abdullah Mohamed, waa qoraa Somali ah.
9. “Alnizaac al Somali wal itoobia” waxa qoray Cali axmed nur.
10″Al-somaal alkabiir” waxaa qoray Dr.raashid baraawi.
11. “Al-somaal qadiiman wa xadiisan”.waxaa qoray Xamdi sayid saalim.
12. “Islam wal xabasha cabra taariikh”.Almuhandis fatxi qayth.
FG.waxaan ka cudurdaaranaya in maqaalkaygii hore anan soo raacin wax tixraac ah, hadaba aqristaasha sharafta leh waxaan u sheegayaa in masaadirtii hore iyo kuwii dambe intaba an ugu soo gudbiyay halkan, sidoo kale waxaan u mahadcelinaya dhamaan intii igu biirisay talo iyo tusaale,walina kama maarmo talada akhristayaasha,hadaba lasoco
Qore Zakaria Ismail Haji nur.
Gabaygii Gudban ‘Gaala-leged’ Sayid Maxame Cabdille Xasan.
Posted on April 4, 2013 by Voice Of Somalia Standard
1898dii ilaa 1910 ayaa Sayidku dadka wuxuu ku waday waano iyo waxsiin si loo helo israac iyo wadajir, gaalana meel looga soo wada jeesto. Inkastoo xaruntii dad badani raacay xoogna ay yeelatay haddana dadkii daraash ku maageerraa aflagaado iyo adyad bey ka deyn waayeen iyo iney gaalada garab iyo gaashaanba u noqdaan.
Markaa Daraawiish waxay la ahaatay haddii waanadii iyo wanaagii la diiday in waran caaradii lagu dayo. Isagoo Sayidku Daraawiish gubaabinaya, wixii loo geystena faalo ka bixinaya dabadiisii la laayeyna gocanaya, waxay ka fali doonnaan tusaalaynaya, meelaha in nabarro loo gesto ku haboonaanna timaamaya wuxuu tiriyay gabaygan soo socda magiciisana la yiraahdo “Gudban” Daraawiishise wexey u tiqiinay “Gaalo lagad”
A – Gudban waxaa loogu bixiyay Saydkoo isu mariyay bari iyo galbeed.
B-Gaala-lagad waxaa loogu bixiyay niman aqooni Daraawiish ahyn, wuxuuna gabaygani ka mid yahay gabayada geyiga oo dhan ku faafy.
DARAAWIISHKII IYO DADKA SOMALIYEED:-Sayid Maxamed Cabdille Xasan uu kusoo noqday Berbera isagoo xajka ka yimid sanadku markuu ahaa 1895kii,Muxuu la kulmay Sayid Maxamed,AUN.
Markii Sayid Maxamed Cabdille Xasan uu kusoo noqday Berbera isagoo xajkii ka yimid sanadku markuu ahaa 1895kii wuxuu tagay miyiga Berbera wuxuuna faafin jiray diinta Islaamka isagoo umadda uga digi jiray inay is dhacaan iskuna duulaan. Wuxuuna heshiis ka dhex beeri jiray beelaha wada degan haddii ay isqoonsadaan. Sidaa awgeed, Ingiriisku wuxuu Sayidka u arkayey ugu horraynba inuu ahaa nin laga dambeeyo oo awood u leh inuu xasiloonaan ka dhex dhaliyo qabaa’ilka Soomaaliyeed. Kuxigeenkii qunsulkii Ingiriiska Berbera u fadhiyey waxa uu xidhiidh joogta ah la lahaa Sayid Maxamed, haddii qas dhaco oo miyiga ka dhacana waa lala socodsiin jiray waxaana laga codsan jiray inuu wax ka qabto.
Ingiriisku waa ogaa in Sayid Maxamed lee yahay xer badan hase yeeshee marnaba kama cabsanaynin odoroskana kumana jirin halgan gobonimodoon ah oo ka bilowdo gayiga Soomaaliyeed. 1899kii waxaa laysa dhex mushaaxay magaalada Berbera Ingiriiskiina soo gaadhay in Sayid Maxamed uu uruursanayo rag iyo saanad si uu ugu duulo una qabsado degmooyinka Koonfur Bari. Dawlada Ingiriisku waxay ku dhaqaaqday inay arintaa isku taxalujiso si ay u ogaato runtu waxay tahay, hase ahaatee Ingiriiska uma suuragalin inuu si sahal ah ku ogaado Sayidka iyo akhbaartiisa waayo dadkii Soomaliyeed ee reerguuraga ahaa baa diiday inay Ingiriiska u xogwaramaan markii la waraystay.
April 12, 1899kii qunsulkii sarre ee Ingiriiska Gaashaanle Sare J. Hayes Dawson* waxaa soo gaadhay warar sheegaya in Sayid Maxamed madax ka yahay ciidamo hubaysan oo tiradoodu gaadhayso 3000 uuna tabaabusho ugu jiro duulimaad ba’an oo uu Ingiriiska kusoo qaado. Bishii August 1899kii waxay ilaaladii Ingiriisku soo sheegtay in Sayid Maxamed yimid Burco isaga oo wata ciidamo 5000 ah oo 1500 oo kamid ahi ay fardooleey yihiin, 300 oo ka mid ahina ay banaadiikh haystaan. Burco waxay ahayd meel xagga tabcooyinka dagaalka aad ugu haboon waayo biyo joogta ah bay lahayd xilliyada abaaraha ah. Sayid Maxamed Cabdille Xasan waqtigaa wuxuu si badheedh ah ugu dhawaaqay inuu dagaal muqadas ah oo gobonimo doon ah Ingiriiska kula jirro asgartiisiina wuxuu u baxshay Daraawiish, wuxuu u faray qabaa’ilka Soomaliyeed oo dhan inay la dagaalamaan, jihaadka liddiga gaaladana ay la galaan.
Waa tuu dareersaday fircoon diracyadiiniiye
Waa tuu diyaar ugu akhriyey diinta gaalada e
Dabci beenna weeyaan waxaad nagu dayeysaane
Waa waxa dariiqii sharciga uga dilowteene
Dowgii Rasuulkiina waad daba martayseene (scw)
Nin dardaran iblayskii dafaa dow ka raaridaye
Dallacaad jacayl baad kurtiin noola dirirteene
Dubaaqiina waxa saa u galay daara buuxsade e
Dux kama heshaan Ferenji aad dul i dhigataane
Dirhamkuu idiin qubahayaad dir u go’aysaane
Marka horre dabkuu idinka dhigi dumar sidiisiiye
Marka xigana daabaqada wuu idin dareensiine
Marka xigga dalkuu idinku odhan duunya dhaafsada e
Marka xigga dushuu idinka rari sida dameeraaye
Sidaa daraadeed, magaalada Berbera waxaa soo xaluushay akhbaar cabsi leh oo sheegaysa in ciidamada Daraawiishtu ay kusoo dhow yihiin Berbera markii ay soo galaana ay baabi’in doonaan ayna dhici doonaan maalka iyo moodka shisheeyaha magaaladana gubi doonaan. Arintaasi argagax iyo cabsi ayey ku riday Ingiriiskii iyo gadisleydii Hindida ahayd kuwaas oo xoolihoodii oo dhan, badeecad iyo qalab waxay lahaayeen ku daldashay markab magaciisa la odhan jidhay FALCON waxayna u qaxeen magaalada Cadan ee dalka Yemen. Nimankii shisheeyaha ahaa ee Soomaliya ka tagay waxay usii qadimeen saraakiishii iyo ciidamadii Cadan laga soo qaadayey khatarta sugaysa marka ay Soomaaliya cagta dhigaan. Shisheeyihii ku hadhay Berberana habayn qudha ma ladin ilaa xeebta Berbera ay soo gaadheen laba markab oo kuwa dagaalka ah oo la kala odhan jidhayMedos iyo Bahome.
September 1, 1899, Warqadan buu usoo diray Ingiriiska oo ku qorayd Afka-Carabiga. Sayidku waxa uu warqadiisa ku bilaabay sidatan:
Ka: Maxamed Cabdille Xasan
Waxaan idiin sheegayaa in aad samayseen wixii aad doonayseen, waxaa kale oo aan idiin sheegayaa in dadka idin rumaysan ay yihiin kuwa khaa’imiin ah oo diintoodii iyo dalkoodiiba caasiyey. Waa Maxamedkii aad taqaaneen oo idin warsanaya in aad hubka iska dhigtaan ood isdhiibtaan sidaa darteed baan warqadaan idiinku soo diray. Eega laba kala doorta: haddii aad dagaal doonaysaan gudooma baanu lee nahay, haddii aad nabad rabtaana baxsha qiimaheeda oo ah in aad dalka isaga tagtaan.
Qunsulkii sarre ee Ingiriisku markii uu akhristay warqadii Sayidka aad buu uga cadhooday waxaana Ingiriisku u aqoonsaday Sayidka inuu yahay nin ku shuftoobay taliskiisa, wuxuuna digniin ku bixiyey Soomaalidii taliskiisa ku hoos jirtay in ciqaab ay la kulmi doonaan haddii habayaraatee wax xidhiidh ah ay la yeeshaan ama kaalmo u fidiyaan Sayidka. Ingiriisku waxay Sayidka u baxsheen ‘Mad Mullah’ oo macnaheedu yahay wadaadkii walaa, waayo xilligaa gumaysigu wax aan miyir qabin oo biimo ah ayuu u haystay ciddii xooga Ingiriisku lee yahay isku dayda in ay is hortaagto. Taaktikada iyo tabcooyinka dagaalka ciidamadii Daraawiishta oo xambaarsan waanadii xusuusanna gabayadii guubaabada lahaa ee Sayidka naftooda bay u hureen dalkooda iyo diintooda siddii ay u daafici lahaayeen.
Ninkii bala’da lagu yeedhiyee bayraq lagu duubay
Kol hadduusan bara aamin baahi geys noqonin
Inaan boqorka loo deynahayn ba’aha yow sheega
Runba nimaan u baydhayn ibleys barale weeyaane
Buunshuhu bilaash iyo hadduu been ka tagi waayo
Inaan dhegaha loo balalinayn ba’aha yow sheega
Baalxaafka waxaa loo sitaa beer wax how dile e
Ninkii loo burhaan qabay hadduu beyda kari waayo
Birtiisu ha jabtee inaan la rabin ba’aha yow sheega
Bogga laga mudyoow fulaygu wuu baydadahayaaye
Goortuu bidhaan cadow arkuu balow yidhaahdaaye
Inaan mowdka laga baajinayn ba’aha yow sheega
Geesiga halkii lagu baxay baa bili ka raacdaaye
Bilaawaha kolkii uu la baxo looga kala baydhye
Isaguna buruu leeyahaye ba’aha yow sheega
Bilowgii sanadkii 1900 Ingiriisku wuxuu heshiish la galay boqorkii dalka Itoobiya Mililikh waxayna isku waafaqeen in ay wadajir Sayidka ula dagaalamaan. Waxaana bishii March 1900, kasoo ambabaxay magaalada Herar ciidamo Xabashi ah oo uu hogaaminayey sargaal Ingiriis ahi, waxayna 24 Maarso Daraawiishta iyo ciidamadii Xabashidu isku haleeleen Jigjiga halkaa oo wax la dilay iyo wax la dhaawacay laga dhigay. Hayes Sadler oo ahaa qunsulkii sarre ee Ingiriiska waxa uu u diray H. G. C. Swayne dhanbaalkan:
Ujeedada duulimaadkiinu waa inaad dishaan Sayidka ciidamadiisana jabisaan, haddii uu Sayidku isdhiibo waad aqbali kartaan, haddii uusan arintaa wax shuruud ah ku xidhin. Markaa ka dibna waa inaad baabi’isaan dhamaanba qabaa’iladii Sayidka taageerada u fidiyey.
Isagoo fulinaya amarkaasi kasoo baxay dawladda Ingiriiska, Swayne oo ciidamo xoog badan oo Afrikan, Hunuud iyo Asian isugu jira wata baa si rasmi ah Sayidka ugu soo qaaday duulimaadkii ugu hareeyay.
Bishii November 1900, waxaa dalka Soomaaliya yimid Gaashaanle Sare Swayne si uu u hogaamiyo duulimaadkii u horeeyay ee Sayidka lagu qaadayey. Swayne kuma uu cusbayn dalka Soomaaliya ee hadda ka hor buu soo raacay walaalkii S. S. Swayne oo ahaa ninkii dalmareenka ahaa ee sahanka ku maray degmooyin badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya, ninkaa oo ahaa kii qoray buugga la magacbaxay Seventeen Trips Through Somaliland oo macnaheedu yahay Todoba iyo Toban Socdaal ee Soomaliya Lagu Maray.
Gaashaanle Sarre Swayne waxaa loo xilsaaray inuu dhiso ciidamadii Sayidka laga horgayn lahaa wuxuuna adkeeyay heshiiskii uu Ingiriisku la lahaa Xabashida, waxayna go’aan ku gaadheen in ciidamo huwan ah ay Daraawiish ku kacaan sidaa daraadeed wuxuu Ingiriisku dalka Itoobiya u diray Gaashaanle (……………………..) oo ka tirsanaa ciidamadii la odhan jidhay Royal Guards, ninkaasi oo soo gaadhay Herer April 1901 si uu u soo qabanqaabiyo una tababaro ciidamo dhinaca galbeed ka weerara Sayidka.
Ingriisku wuxuu dagaalkaa ku waayey kumanyaal askar ah iyo saraakiil fara badan oo ay ku dhaaran jireen, waxaana ka mid ahaa Gaashaanle Phillips, Dhame J. N. Arms, Dhame C. N. S. Cord iyo kuwa fara badan oo kale. Markii uu Berbera yimid Swayne wuxuu bixiyey xogwarankan:
Waxaan aad ula amakaagay sidda ay naftooda u biimaynayaan Daraawiishtu. Marnaba u malayn maynin ilaa aan dagaal kula kulmay in khatarta Daraawiishtu heerkaa gaadhsiisan tahay. Daraawiishtu waxay u badan yihiin niman xaasaskoodii, ciddoodii, iyo maalkoodii kasoo tagay si ay u noqdaan naftood hurayaal. Waxay sitaan cimaamado iyo go’yaal bayl ah, waxayna qabaan amar ah inay dilaan Ingiriiska iyo askartiisa qiima kasta ha ugu kacdee, iyagoo rumaysan haddii la dilo iyo haddii ay wax dilaanba inay janada galayaan. Sidaa darteed, goobtii dagaalkii raggii Daraawiishta uga dhintay waxay u badnaayeen xaajiyaal iyo shuyuukh noogu soo galay dhufayskii aanu ku jirnay iyagoo leh, Allahu Akbar ama Ilaah baa weyn.
Hadalkaasi waa xog warankii Swayne. Duulimaadkii koobaad iyo kii labaad oo bilowday 1899 waxa ay dhamaadeen October 6, 1902 dii. Goobihii Ingiriiska iyo Sayidku ku kulmeena waxaa ugu weynaa Af-Bakayle iyo Fardhidin.
Ninka gaala aynabay intuu gamasyada u qaatay
Gubniyaalka fooskaa ninkii gowrac ugu jiiday
Sidii boodhle geesala’ ninkii gaaddaduu mariyey
Igiriiiska goolka ah ninkii gudurida u loogay
Guutooyinkuu wacay ninkaan gaban kasoo deynin
Girligaammaduu siday ninkii goobta kaga qaatay
Geesaaska Cadmeed ninkii kaga gallaydhsiiyey
Gidigeed Nasaarada ninkii goomanka u qooyey
Siddii caydh gorfaalaa ninkii gobolba meel aadshey
Geyigaba ninkii galangashee guuya kaga dhaartay
Gabagaba intuu dhigay ninkii libin ku geeraaray
Gadoodkii dagaalkii ninkii guusha kala laabtay
Gaafaha ninkii laga maree haatan laga gaaray
Garbiduu ku tiirsaday ninkaan laga gurguureynin
Ninka yidhi gol madhan waa miduu galay wadkiisiiye
Ingiriiska intii ay socdeen labadii duulimaad ee horre waxaa u korodhay waayo-aragnimo dheeraad ah waxayna ogaadeen xoogga Daraawiishta oo ah mid aan dhayal loo loodin karin. Ciidamadii Ingiriiska ooy kamid ahaayeen kuwii la odhan jidhay King’s African Rifles waxaa kusoo kordhay kalsooni darro iyo baqdin ay ka qaadeen Daraawiishta oo aan cadowga u turin. Si haddaba loo qabanqaabiyo loona kiciyo duulimaadkii saddexaad waxaa Soomaaliya yimid Oktober 23, 1903 dii General W. H. Manning, dawlada Ingiriiskuna waxay heshiis la yeelatay Talyaaniga oo ay isku waafaqeen in Talyaanigu geesta Bari kasoo weeraro Sayidka. Sidaa darteed laba markab oo ah kuwa dagaalka ooy Ingiriiska iyo Talyaanigu kala leeyihiin ayaa xeebaha dalka ku wareegaalaysanyey si ay u sahmiyaan meel ay asgartooda kasoo dajiyaan Sayidkana ka gaadaan.
September 16, 1903 dii waxa uu golaha wasiirada ee dowlada Talyaanigu u ogaaladay in Ingiriisku kasoo rogo ciidamo uu lee yahay magaalada Hobyo, sidaa daraadeed Ingiriisku wuxuu go’aan ku gaadhay inuu wado duulimaadkii saddexaad isagoo ciidamo xoogleh kasoo rogay Hobyo iyo Berbera si uu dhinac walba uga hareereeyo Sayidka. 1903 dagaalkii ka dhacay Gunburo Ingiriisku wuxuu u bixiyey Raqdii Gunburo sababtoo ah goobtaa waxaa ka raacday guuldaro culus.
April 1903 dii Sayidku wuxuu Ingiriiska usoo diray warqadan markii Nugaal uu u hayaamayey:
Ka: Sayid Maxamed Cabdille Xasan
Waxaan idin leeyahay maqla hadalkayga oo tixgaliya. Waxaan doonayaa in aan dalkayga u tasho diinataydana daafaco. Hadalkayga maqla oo tixgaliya. Ma aad maqashaane dhibbaa dacalka idiin soo gaadhay. Waxay idiinku sheekeeyeen Daraawiishi waa carartay, ma ay cararinse ee waa dagaalamayaan. Waxaan u guuraynaa meeshii aan doono anagoon baqayn. Waxaan doonaynaa in aan idinla dirirno dagaalkana aad ayaan uga helaa, hase yeeshee idinku maya. Haddii Ilaahay yidhaahdo waxaan idinka furandoonaa hub fara badan. Anigu ma lihi hodannimo, ma lihi guryo, ma lihi beero, ma haysto dahab iyo dheeman midna aad iga dhacdaan. Dadkaygu wax wanaag ah idiin mahayo idinkuna uma haysaan. Aniga waxaad iigu timaadaani waa xabad iyo dagaal wax kalana iga heli maysaan. Waxaan kula kulmay raggiinii dagaal waana aan wada gowracay. Dadkii naga dhintay waxay shaqaysteen janno, Ilaah baa nala jirra haddii aad dagaal wadaan raali baanu ka nahay haddii aad nabad rabtaana ka baxa dalkanaga oo aada dalkiinii, haddii aad dagaal rabtaana sii jooga.
July 3, 1903 dii waxaa dhamaaday duulimaadkii saddexaad oo intuu socday Sayidka iyo Ingiriisku Bari iyo Waqooyiba ku dagaalameen. Waxaa Ingiriiska gaadhay jug weyn waxaana saraakiishii uga dhintay dagaalka ka mid ahaa Gashaanle Sare A. M. Ruthford, Gaashaanle Dhexe A. W. D. Francis oo hogaaminayey ciidamadii la magac baxay Regiment Manchester, Dhame S. T. Albright oo taliye ka ahaa ciidamdii loo yiqiin ……….. Regiment, Kabtan J. John Stewart oo ka tirsanaa ciidamadii loo yiqiin Argyll and Sutherland Highlanders, Dhame H. H. de B. Morris oo madax ka ahaa Est Kent Regiment, Dhame J.A. Gayonr, Dhame S. L. McKinnon oo madax ka ahaa North Derby Regiment ciidamo badanna xukumay. Guud ahaan, sida uu qoray Douglas Jaridine, waxay dagaalkan Daraawiishtu dhagta dhiiga u dartay sagaal (9) sargaal oo sarsare oo ciidamadii Ingiriiska hogaanka u hayey, in ka badan 187 askari, iyo in ka badan 29 askari oo dhaawac xuni soo gaadhay.
Magacyadaa aan soo xusnay waxay ka mid ahaayeen boqolaalkii saraakiil ee Daraawiishtu laysay dagaalku intuu socday.
Duulimaadkii afraad wuxuu ahaa mid ay xoog uga qeyb galeen maraakiibta dagaalku, waxaana Ingiriisku go’aan ku gaadhay in Sayidka siddii dowlad xoog badan oo kale loola isticmaalo. General LAYNE ayaa loo xilsaaray fulinta duulimaadka afraad, waxaa kale oo la shaqaynayey Sareeye Guuto Egerton iyo Sareeye Guuto Fasken. Intii uu socday dagaalkaasi waxaa Ingiriiska Sayidku gaadhsiiyey khasaarooyin xoog badan waxaana cadowga ka dhintay saraakiil badan oo ay kamid ahaa Dhame J. R. Williams, Dhame G. Ester, iyo Laba Xidigle T. H. Aurder iyo kuwa kale oo badan. Goobihii laysaga horyimid intii duulimaadyadaasi socdeen oo Daraawiishta iyo Ingiriisku isku haleeleena waxaa ka mid ahaa Beerdiga, Cagaarweyne, Daratoole, Taargooye, iyo Jidbaale.
Haddii aynu tusaale ahaan usoo qaadano heshiishkii Pestalozze 1904tii, wakiilkii dowlada Talyaaniga u fadhiyey Soomaaliya Pestalozze wuxuu aaday Illig oo uu rabay inuu Ingiriiska iyo Sayidka ku dhexdhexaadiyo wuxuuna ugu horrayn hindise kusoo jeediyey in Sayidka:
Degaan rasmi ah la siiyo
Dawladnimo gudaha ah loo ogolaado
Xornimo iyo madax banaani ganacsi la siiyo oo uu helo
Nugaal iyo Howd ay noqdaan dhul aan Sayidka lagu faragalinin
Maarso 5, 1905tii baa Sayidku heshiiskaa dhab ahaan u ogolaaday isaga oo doonayey inuu helo muddo uu isku dubarito ciidamadiisa, hubna baadigoobto, iyo in uu kasoo kabto khasaaradii ka gaadhay dagaalkii Jidbaale. Heshiiskaasi markii in yar dhaxal gal noqday, ayaa Ingiriisku wuxuu bilaabay inuu hub ka baadho doonyihii Sayidka badeecada u siday. Sayidku wuxuu Ingiriiska u soo diray warqad uu ugu sheegayo inay khilaafeen heshiiskii, markii ay baadheen doonyihiisii iyagoo ka gaashaamanayey in Sayidku hub culus lasoo dego, arintaa oo Sayid Maxamed aad iyo aad uga cadhooday, waxyeelada ka imaandoonta uu Ingiriiska yidhi idinka ayaa qaadaya. Wuxuu Sayidku warqadiisa kusoo hagaajiyey taliyihii sarre ee Ingiriiska F. C. S. Gordon, wuxuuna u sheegay in haddii la doonayo in heshiishkii Pestalozze uu hirgalo oo uu socdo inaan lasoo faragalin Sayidka badeecadiisa loona soo celiyo hubkii iyo saadkii laga dhacay.
Sayid Maxamed waxa uu si badheedh ah ugu sheegay Ingiriiska mar haddii ay jabiyeen heshiiskii isaguna in uusan maanta ka dib dhowraynin, arintaasi oo Ingiriisku u fasirtay in Sayidku soo kicin doono dagaal hor leh. Sidaa daraadeed waxaa laysku soo qaaday in la dumo duulimaad iyo col fara badan oo Sayidka laga horgeeyo. Dalka Ingiriiska 1908 baarlamaanku canaan kulul buu usoo jeediyey dawladda isagoo ku eedeeyay lacagta faraha badan ee dagaalka lagu hoobtay Ingiriisku uu ku bixinayey iyo askarta faraha badan ee ku dhimanaya. Sidaa darteed, November 30, 1908 wasiirkii isticmaarka ee Ingiriiska wuxuu u soo diray taliyihii ciidama ee ka talinayey Soomaliya warqad uu ugu sheegayo in aan Ingiriisku hadda ku talo jirin dagaal Sayidka lagu qaado.
Dawlada Ingiriisku waxay isku dayday inay Sayidka kula isticmaasho siyaasad la mid ah tii boqoradii Hindida ay kula dhaqantay oo ah inay maal badan iyo mushaaro joogta ah siiso. John Talon, Maarso 3, 1910 wuxuu baarlamaanka Ingiriiska kasoo jeediyey hindise laysku raacay oo ah in Sayidka sanadkiiba la siiyo 2,000 oo Istarliin (lacagta Ingiriiska.) Hase yeeshee Sayidku gaashaanka ayuu ku dhuftay arintaas wuxuuna u sheegay Ingiriiska inuu doonayo gobonimo, gobonimadana aan la gorgorin karin. Sayidku wuxuu hadalkii kusoo koobay diintayda iyo dalkayga gadan maayo. Wuxuu yidhi:
Nimanyahoow damiinimada waa lagu duloobaaye
Dadku wuxuu jeclaystaa waxaan duxi ka raacayne
Anaa diidaday dagal inaan la galo daalin ii col ahe
Dalka ma lihid anigaa ku idhi dooro weynaha e
Anaa diiday nabadiisa aan daacad noqonayne
Anaa diiday deeqdiisa ay naari dabataale
Anaa diiday maantuu lahaa duunya iga hooye
Markay duusho gaaladu anaan daabada u qabane
Kolka ay dareeraan anaan duud xamaal noqone
Dahabkii uuu waday waa anigii daadiyoo qubaye
Dagaalkiisa anigoow xishayoo daalib ku ahaaye
Durdurada Fardowsaad anaa doortay oo rabaye
Diinatayda anigaan ku gadan dabaqii naareede
Anigaan dariiqada Alliyo diinta caasiyine
Anaan labada daarood tan horre darajo moodaynin
Daliilkii Rasuulkii anigaa doonayoo helaye (scw)
Doofaarka eyga ah anigaan daarihiis galine
Anigaan dillaalkii arliga duubabka u xidhane
August 1913kii waxaa dhacay dagaalkii Ruuga (Dulmadoobe) oo ahaa kii lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska Richard Corfield, gaalkaasi oo Soomalidu u taqaanay Koofil ahaana ninkii Sayidku ka tiriyey gabaygii caanka ahaa, ee Adaa Koofiloow Jiitayoon. Waxaa kale oo halkaasi ku geeriyooday saraakiil badan oo Ingiriis ah oo uu ka mid ahaa Dhame J. S. Summers.
Adaa Koofiloow jiitayoon dunida joogayne
Jahanaba la geeyoow haddaad aakhiro u jahato
Nimankii janno u kacay war bay jirin inshaalleye
Kuwase naarta joogiyo markaad jananadii gaadhid
Sida Eebbahay kuu jirabay mari jawaabteeda
Daraawiish jikraar nagama dayn tan iyo jeerkii dheh
Jigta weerar bay goor barqo ah nagu jifeeyeen dheh
Ingiriis jabyoo waxaa ku dhacay jac iyo baaruud dheh
Waligiisba waa lagu jabshaa jilib-dhig duulaan dheh
Haddaan lays jigraarayn tolkay laga jil roonaa dheh
Waxay noo junjuunteena waa jamasha diineed dheh
Anigana Jigreey ila heleen shalay jihaadkii dheh
Jeeniga hortiiseey rasaas igaga jiideen dheh
Jiiraayadeey ila dhaceen jilic afkoodii dheh
Jidhkaygii caddaa bay abley jagac ku siiyeen dheh
Siday kuugu jeexeen magliga jararacdii sheego
Bilaawuhu siduu kuu jarjaray jiilalkaa u muuji
Jiidaha xanuunka leh markii la igu jeeraarshay
Jibaadka iga soo baxay nafluhu jiifka qaban waa dheh
Naf-jeclaysigii baan ku idhi jaalloow iga daa dheh
Jimic kagama helin tuugmadaan jiriyey ruuxii dheh
Goortaan jarreerana galoo nolol ka jaan qaaday
Wax badan baan janaacaye dhagbaan jalaq la ii siin dheh
Juuqdii aan la yeedhaba afkay iga jifeeyeen dheh
Jaljaleecadii baa wadnuhu jeex isoo ruqay dheh
Jeedaaladii bay indhuhu kor u jilaabmeen dheh
Markay rubbadu jaw tidhi or bay iga dul jiibsheen dheh
Jiidhkaygii bahal baa cunayoo jiitay hilibkii dheh
Jurmidiyo baruurtii dhurwaa juguc ka siiyaa dheh
Jiljilladiyo seedaha tukay iga jeedeen dheh
Siddii jananadii horre tashigu igu jaguugnaa dheh
Jidkii uu iblays ii horgalay jaasadii helay dheh
Daraawiishna waa jibindhowgiyo jowga soo bixi dheh
Waxaa xusid mudan in ninkan ay Soomaalida badankeedu u taqaano Koofil uusan kaliya ahayn nin neceb kana soo horjeeda halganka gobonimo doonka ah ee Sayidka iyo Daraawiishtiisa ee uu ahaa nin jinsiga Soomaaliga ah siddiisa u neceb. Wuxuu in badan ciidamo ku bixiyey oo uu soo mooroduugay shacab Soomaaliyeed oo wax ay u dhimeen iyo wax ay u geysteen Ingiriiska uusan jirin. Shacabkaas oo badankiisu ahaa kii ku hoosnoolaa ximaayada Ingiriiska. Mar uu ku duulay reer guuraa meel deganaa kana soo dhacay waxay mood iyo nool haysteen waa kuu Ina-Weysaxume tixda ku mariyey:
Adigiyo gubniga aad wadataa goobataal noqoye
Girligaanku kaa joogsayoo guuxa kaa damiye
Ku googooste nimankii kufriga gaajada u qabaye
Afku gow’ ku yidhi xaajadaad gees u badisaaye
Guga ha gaadhin adigaa tolkey gaajadaa badaye**
Ingiriiska waxaa u muuqatay dagaal badheedh ah in aan waxba Sayidka lagaga qaadaynin haddii aan la badalin tabcada lagu socdo. November 1918kii gudi uu madax ka yahay General Hopkins oo loo xilsaaray inay darsaan xaallada Daraawiishta talooyin dagaaleedna ay Ingiriiska siiyaan ayaa yimid dalka Soomaaliya. October 1919kii baarlamaanka Ingiriisku wuxuu go’aan ku gaadhay inay Sayidka siddii dawlad xoog leh oo kale ula dagaalamaan, ayna duulimaadka ka qeyb galaan ciidmada dhulka, cirka iyo badduba.
Ciidamada Ingiriiska ee barrigu waxba waa ka tari waayeen Sayidka waana usoo dhawaan waayeen Taleex iyo qalcadihii kale. Sayidku wuxuu ku caan baxay tabco iyo taaktiko dagaal. Ugu dambayntii Janaayo 21, 1920kii, waxaa Sayidka lagu soo kacshay dayuuraadka dagaalka waxaana weeraradaa hogaaminayey Dhame Duuliye Gordon wuxuuna cadowgu isticmaalayey diyaaradaha noocoodu ahaa DH9, waxayna duqeeyeen Taleex, Jiidali iyo xarumihii Sayidka oo dhan. Sidaa darteed, Daraawiishtu waxay ahaayeen urur gobonimo doon ah ee adduunyada ugu horeeyey ee dayuuradaad lagula dagaalamo. Taasina waxay muujinaysaa dhiiranaantii iyo halgankii Daraawiishtu gobonimada usoo galeen.
Sayid Maxamed intaa kadib wuxuu soo aaday Koonfur. Febraayo 17, 1920kii, taliyihii Ingiriisku wuxuu usoo diray Sayidka warqadan.
Waxaan usoo diray waqti saddex todobaad laga joogo Darawiishta warqad aan ugu sheegayo in la magan galin doono haddii ay isdhiibaan. Hubkaaga iyo kaygu isma leh, adigu waxaad tahay wadaad Soomali ah, anna waxaan wakiil ka ahay dawladda adduunka ugu xoogga weyn oo ka adkaatay Jermalkii iyo Turkigii. Maanta xoogaagii waa yaraaday, dayuuraadkana uma adkaysan kartaan, dhinac aad u ciirsatana ma jirro. Waxaa xagga Bari kaa xigga Boqor Cismaan Maxamuud iyo Cali Keenadiid oo labaduba col kula ah adiga iyo halgankaagaba mana aadi kartid. Dhanka Itoobiya saaxiibkaa Leit Yasuuf waa jiitay, Ras Taferina waa saaxiibkay. Awood uma lihid inaad nala dagaalanto. Waxaan laayey ciidamadaadii badi ahaan, gacalkaagiina gacantayda ayey ku jiraan. Ujeedadaydu ma aha inaan wax laayo haddii aad is dhiibto 40 casho dhexdood. Ammaan iyo xushmo ayaad heli doontaa. Waxaanse kaaga digaynaa in aadan warqadan caasiyin. Waxaanan ku siinaynaa rug aad ku noolaato diintaadana ku fidisid. Warqad ama jawaab aad iisoo dirto wax micnaha ah ama qiima ah ooy leedahay ma jirto haddii aadan 40 casho dhexdood ku imaanin. Waxaan warqadan kuugu soo dhiibay haweenaydaadii.
Maarso 25, waxaa Ingiriiska u yimid Sheekh Cali oo ahaan jiray qaaligii Taleex iyo Xaaji Cismaan oo Sayidka adeerkii ahaa oo wada jawaabtii waraaqdii Sayidka loo diray. Warqaddii Sayidku waxay ahayd sidan:
Waan helay warqadii aad soo dirteen 22kii Jamaadul Aakhir, jawaabteediina waatan. Warqadaadii macnaheedu wuxuu ahaa inaad ka adkaateen Jermal iyo Turki xoog badanna leedihiin iyo inaan isdhiibo. Isdhiibi maayo dagaalkana waan wadayaa inta aad idinku wadaan. Amaan iyo magan-galiyana Ilaah baa leh xoogna ninkuu siiyo ayaa iska leh.
Ingiriisku wuxuu ugu dambayntii go’aan ku gaadhay inuu Sayidka u diro ergo ka kooban maashaa’ikhdii Goboladda Waqooyi oo kala ahaa:
Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq madaxii dariiqada Saalixiyada, Skeekh Cabdullahi Sheekh Madar madaxii dariiqada Qaadiriyada, Sheekh Maxamed Xuseen iyo cuqaal fara badan ooy ka mid yihiin Caaqil Cali Aadan, Caaqil Jaamac Madar, Caaqil Ibraahim Warsame, Caaqil Xirsi Xuseen, Caaqil Xaaji Cabdullahi Jaamac, iyo Caaqil Cali Guuleed. Ergadaa ka koobnayd maashaa’ikhdii dariiqada iyo todobada Caaqil waxaa loo diray ergo ahaan Sayidka waxayna wadeen warqad Ingiriisku ku warsanayey Sayidka inuu ergadaas soo raaco. Ergadii waxay ka baxday Burco April 9, 1920kii iyadooy hogaaminayeen labadii nin ee warqada jawaabta ah Sayidka ka keentay, Xaaji Cismaan iyo Sheekh Cali.
16 casho oo socod ah ka dib, April 25, waxay soo gaadheen Qoraxay oo xarunta Sayidku u jirtay 40 mile. Sayidku ergadii waxa uu amar ku siiyey inay Ingiriiska ku noqdaan una sheegaan inaan Sayidku marnaba isdhiibaynin. November 23, 1920kii ayuu Sayid Maxamed, naxariistii janno Allaha siiyee, si caadi ah ugu geeriyooday Iimeey isagoo gacanta ku haya gamaskii xornimada iyo gobonimada.
Markuu geeriyooday Sayid Maxamed gumaystuhu wuxuu isku dayey inuu daboolo halgankii uu soo galay iyo ujeedooyinkii uu lahaa ee uu u dagaalamayey in ka badan 21 sanno. Waxa uu Sayidku mutaystay in lagu qorro magaciisa iyo taariikhdiisaba baal dahab ah waayo waxa uu u diiday gumaysiga inuu ku lado dalka Soomaaliyeed.
Inuu gaalku dili oo khatali dayiba maayaane
Dafiraadu waa xeel runbaa lagu dabuubaaye
Dilaal waxaad cunaysaan intaan dunida joogaaye
Hadalkaa dilaacshaye miyaan deelka ka habowshay
Wax ma dadine macnihiina sow idin ma deqsiinin
Nimanyahoow dantey baan hadlaye iga daliil qaata
Dacwadayda meeshaan u dhigo fiiro dib u yeesha
Waxna loogu digiyaa ninkii dawladnimo haysta
Waxna loo danleeyahay ninkii diinta Nabi raacay (csw)
Nin rag ah bay dardaaran u tahee doqonse waa mooge
Afartaa intaan dow ku xidhay deel ma qabadsiiyey
Deelqaafku waa ba’an yahaye daacad ma u sheegay
Dacwad kalana Soomaali waa mid aan dareensiiyey
Taariikhdii koobnayd ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan iyo halgankii muqadaska ahaa ee uu kula jiray gumaysiga waxaan kusoo af-jaraynaa tuducyo kooban oo ka mid ahaa gabaygii caanka ahaa ee Sayidku mariyey dabayaaqadii noloshiisa ee la odhan jiray Dardaaran:
Doodna waxaan u leeyahay dadkeer hadalka deyn waayey
Dagaalkii Nasaarada anaa daalib ku ahaaye
Daliilkii Rasuulkii anaa doonayoo rabaye (scw)
Anaa diiday maantuu lahaa deeqan iga hooye
Anaan labada daarood tan hore darajo moodaynin
Markay duushay gaaladu anaan daabbaddu rarine
Goortay dareeraan anaan diiradduu qabane
Anigaan dariiqiyo waddada dowga sii marine
Anaan doora-weynoo kufriga daacadnuu geline
Ferenjiga dirayska leh anaan diiradduu qabane??
Sida doxorka Iidoor anaan duud-xamaal noqone
Doofaarka eyga ah anaan daarihiis geline
Anigaan dilaalkiyo ardiga duubigoow xidhane
Daarood Ismaaciil ma oga dowga loo qodiye
Waa wixii durbaan tumay markaan dowga sii maraye
Waa wixii dayooy yidhi intuu soo dabaaldegaye
Dadow maqal dabuubtaan ku idhi ama dan haw yeelan
Ama dhaha darooryiba jiryaye doxorku yeelkiisa
Nin rageey dardaaran u tahaye doqoni waa mooge
Marka xigana daabaqada yuu idin dareensiine
Marka xiga dalkuu idinku odhan duunya dhaafsada e
Marka xiga dushuu idinka rari sida dameeraha e
Mar haddaan dushii Adari iyo Iimeey dacal dhaafay
Maxaad igaga digataan berruu siin lasoo degiye
Waxaan ka qorray barnaamij laga soo daayey Idaacadii Muqdisho, buuggii Aw-Jaamac Cumar Ciise,Early Days in Somaliland and Other Tales by H. G. C. Swayne, iyo The Warrior Mullah by Ray Beachey meelaha qaarkood ayaan ka saxnay. Magacyada qaarbaan wali saxnayn qaarna waaba maqan yihiin. Sixidooda iyo helidoodu waa howl inoo wada taala. Mahadsanid
**Taariikhdii Daraawiishta iyo Sayid Maxamed Cabdille Xasan. Aw Jaamac Cumar Ciise.
DHAGEYSO GABAYGA:-Gabay la magac baxay DIGNIIN oo ku socda Madaxda Ururka Al-Ictisaam.
Posted on March 5, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Abwaan Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa mariyay Gabay loogu magac daray Digniin, kaas oo ku socda Madaxda Ururka Al-Ictisaam.
Gabaygan waxa uu soo cabirayaa dabinada Ururka Al-Ictisaam ay u dhigaan Diinta Islaamka,dadka iyo dadka Soomaaliyeed.
Ururka Icitsaam ayaa ah urur diineed safka ka galay dhinaca gaalo dhan ay ku jiraan,waxayna sheegeen inay duulaan ama dagaal ku qaadi doonaan meel walba oo laga sheego in Diinta la isku xukumo,waxayna si cad u garab istageen ciidamada shisheeye oo duulaamka ku jooga gayiga Somaliyee
"Nimanbaa shareecada siroo, gaalka saacidiye
Oo saarashada ferenjigiyo, saanjigaw xilanne"
Waxaa mudo dheer la yiri Sayid Maxamed Cabdille Xasan,waana gabay ilaa maanta la hadal hayo.
Halkan Ka Dhageyso Gabayga MP3
VIDEO MAQAL AH:-Gabaygii Shirkiga IYO Abwaan Abshir Bacadle.AUN.
Posted on January 25, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Waa gabay aad u qiimo badan oo markastana la socda xaalad walba oo Somali ku sugan tahay, gaar ahaan waqtiga hada la joogo oo Somali ay haysato dhibaato aan lagu soo koobi karin qoraalo ama gabayo!
SHIRKI ayaa la yiraahdaa waa is xusuusin la is xusuusinayo aakhirada iyo maalinta qiyaamaha xaalku sida oo noqon doono,ILAAHOW NA MOOTI.
Fadlan u duceeya Abwaanka hadii aad dhagaysato gabayga oo ah dhaxal Abwaan Abshir Bacadle,Raxiimulaah u dhaafay ummada Somaliyeed,hadii aad awood SHARE-gareey ama gaarsii dadka kale.
AQRISO GABAYGA:-Abuu fatima oo Gabay katiriyay Dhacdadii Buula-mareer
Posted on January 19, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Gabayga magiciisu waa Buulomareer fartiin nooga timid farax islaamkiiye wuxuu soo baxay 30 ka safar 1434 waa walaalkiin Abuufatima oo idin leh yaa mujaahidiin haniian lakum ahdaaftiina allaah haydiin xaqiijyo aduun iyo aakhiraba umada muslikaana leh yaa umatal islaam haniian lakum limaa yasuru kum min akhbaarin jamiilah , walaalaha aanan maga cooda xusin xiligaas waqti dambe oo hamyn ah ayey u ahayd waana hubaa markay helaan khabarkaan inaan ciduna kahorfaafinayn.
Buulomareer fartiin nooga timid farax islaamkiiye
Fatxi baa kadhay iyo halkaas libin fasaaxaahe
Fajac iyo jabay kala kulmeen faransa goobtiiye
Wiilal wada fidaa,iina iyo faaris baa helaye
Ayagoo fartiin loodiriyo fayl lasoosiiyey
Foogtii horteed bay kufrigu furo yiraah deene
Fadli Eebe wee yoo markale faashil laga yeelye
Wiilal feejignaa baa heliyo faaris geesiyahe
Fatxi baa Ilaah siiyey iyo guul fagaaraahe
Faransiiska gaalkaa baqay fagax yiraah deene
Tooshash koodi waa laga furtiyo faalguray badane
Firxad koodi hawd kuu galiyo faafka wabigiiye
Fadeexaa Ilaahay badiyo foolxumoo idilee
Fursaantii shabaabaa heliyo geesi fool adage
Fartuu qaado waa laga jabshoo faransa ceebowye
Meeshuu maxbuus furan lahaa mayd kakala fiigye
Buulomareer fasaad kuu larabay faransa beenowye
Rag cashiqay firdawsaa heliyo khaalid fariciise
Faaruuq ilmihi weeye iyo faatix ubad kiise
Fagaaraha dagaal kay dhigaan faajic yaab badane
Wax kastoo faranji xoog is biday faydo lagu waaye
Filan waa ayaa lagu dhigoo faafi kari waaye
Fasiraada guushaan helaa faaftay dunidiiye
Foolxumo lalaabtiyo jabiyo faashil hadafeede
Faadhirow Ilaahow adaa furashadaas keenay
Fadligeeda adigaa lahoo fiijay cadawgiiye
Fahmadaw siyaadiyo shabaab faydo loo aayo
Ilaahow fataaliyo halaag faranji soo duulay
Ilaahow fartuu qaado jabi ways fajiciyaaye
Faduul iyo xad gudub buu wadiyo xume facway naaye
Fuxshi iyo sinay doonayaan nagu fasaad shaane
Aydhis bay ku faafshaan halkay fuqurku gaaraane
Fidaaiin ku daa iyo Alow malag fajaaseeya
Fitig faatig yeel iyo halaag faranji soo duulay
Ilaahow fadeexee kufrigu faasiq wee yaane
Fatahaada wabiyada ku daa faranso fiideeca
Ilaahow fadhiga looga koco oo lakala feento
Faro iyo itaal bay Rabow isla fatiiraane
Faqri baahan yeel iyo Alow fuqur lakaalmeeyo
Fasal baxa Ilaahow u diid faranso ciideeda
Furuq iyo xanuun ayan daawo filanaynin
Faransiis Ilaahow kudaa faasiq wee yaane
Ilaahow fajaasiyo xanuun fayras kala gaabsha
Oo ayan filayn iyo ku daa marad ku faafaaya
Fadligaaga Eebow adaan faraha kuu taagtey
Faxanow Ilaahow kufrigu faasid wee yaane
Balo wada fatahaysiyo ku daa cudur figtood qaada
Fasal kaan wixii helay kufriga faraxday laabtaye
Falaad kaa ragii dhigay ragii faransa ceebeeyey
Fatxi iyo Ilaahow libsii faariska islaamka
Fasiraadu way adagtihiyo faraxa laabtaye
Ilaahow fursaantii shabaab faafto sharaf toodu
Fatxi iyo Alow furasha sii gaalna laga fooso
Faras aanu baran buu kufrigu fuul is lee yahaye
Dhagartay falkinayeen kufrigu faashil wee yaane
Fahmadooda Eebow shabaab fidi lisaankayga
Fatxi lala cajabo iyo Alow furasho soo yeedho
Faransiisna hoojiyo wixii gaal u faradhuubaan
Jawaasiista faransiis Alow fayd akhbaar tooda
Farta noogu fiiqoo Alow fiidkan lagu leefo
Ilaahow fagaaraha ladhigo cadaw na faaleeyey
Ama faylka gaalada u diray una farfiiqaayey
Fuuniyaha akhbaartooda keen faadhir khabar kooda
Fatal iyo jawaasiis xunoo finisha wee yaane
Faaris lagu salado iyo amniga waa fasaadiine.
VIEDO MAQAL AH:-abwaan Abshir Bacadle.AUN. iyo gabaygii la magac baxay “TALIBAN”.Waqtiyado isku eg!
Posted on January 13, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Halkaan ama hoos ka dhegayso Gabaygaan aadka u wanaagsan ee ka hadlaa dhibka america iyo Yahuudo ku hayaan guud ahaan Islaamka gaar ahaana Afghanistan iyo meelo bdan oo dunida Islaam ah .
Fiiro Gaara Gabaygaan waa aw dheraa waana soo kala qaybshe 2 qayb ayaana ka dhigay tani waa Qaybtii 1 aad insha’Allah Qaybta labaadna waa soo daabici doontaa Inshlaah.
FIIRO GAAR AH U DUCEEYA ABWAANKA INOW ILAAH GEEYO JANATUL FARDOWSO,KISTAABIISANA MIDIGTA KA SIIYO,LANA SOO SAARO KUWII OO JELAA AHLU TOWXIIDKA.
Imaam Sheekh Xasan Sheekh Nuur Sheekh Axmed
“ Sheekh Xasan Barsane “ ( 1853 – 1927 )Sheekh Xasn Sheekh Nuur Sheekh Axmed oo lo yiqiin Sheekh Xasan Barsane wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1853, wuxuuna ku dhashay tuulada loo yaqaan Ubaadi oo u jirta qiyaas ilaa 68Km magaalada Jowhar, Gobolka Shabeelaha Dhexe, Soomaaliya.
Hooyadiis waxaa la dhihi jiray Xalima Hilowle Sheekh Xasan wuxuu ka soo jeeday qoys Somaali ah una saxiib ah Diinta Islaamka iyo fardooleey. Aabihii Sheekh Nuur wuxuu ahaa sheekh. Wuxuu ka dhex muuqday hoggaminta diinta iyo dadka in wax la baro oo dalkana loo diido gumaysiga gaalada soo duushay oo dhan.Sheekh Xasan Sheekh Nuur Sheekh Axmed wuxuu bartay Qur’aan Kariimka isagoo yar, kuna bartay tuulada Ubaadi wuxuuna barashada Diinta Islaamka ku bilaabay isagoo aan weli gaarin 10 jir halkaas oo la sheegay in aabihiiis uu mashaa’ikhda Diinta bartaa ugu keenay. Markuu laabatan jirsaday ayeey isaga iyo aabihiis isku raaceen inuu sii kordhisto wax barashadiisa uu doonto iyadoo ay jirtay in aabihii uu mashaa’iikh fara badan ugu keenay halkii ay ku noolaayeen.Sheekho wuxuu aaday meel walbo oo uu ku tabaayay in cilmi uu yaalo oo uu ka sii kororsan karo meelaha uu cimliga u doontay dalka gudihiisa waxaa ka mid ahaa Mateey Aw Xasan oo ku taala Afgooye iyo Muqdisho. Sheekhu kama uusan tagin inow raadiyo cilmi isagoo markaana gaaray dalka dibadiisa sida magaalada MAKA EE SACUUDIGA oo tagay laba jeer oo kala duwan wuxuuna halkaas ku soo gutay xajkii iyo cilmi uu raadinayay, wuxuu halkaas ku maqnaa muddo ka badan saddex sanadood.
Sheekhu waxa uu halkaasi kula soo kulmay Sheekh Maxamed Saalax oo sheekha ay dariiqada SAALIXIYADA .
Sheekh Xasan Barsane markii uu ku soo laabtay dalka waxaa dalka soo buux dhaafiyay gumeyste kala duwan oo markaas iyo ka horba ku sugnaa dalka tan iyo intii ay dhacday qeybsashadii Afrika ( 1884 ) dalalka reer galbeedka oo ay ugu horeeyeen Ingiriiska, Faransiika, Talyaaniga iyo Bortaqiiska ayaa soo galay dalkeena hooyo ee Somaaliya.
Sheekhu wuxuu ka biyo diiday inow ku hoos noolaado gumeystaha isagoo ka door biday inow Shahiido isagoo dhawraya sharafta Diinta iyo dalka.
Sheekh Xasan wuxuu dhexgalay dadka isagoo isku keenay ciidamo tiradiisa lagu qiyaasay ilaa laabtan kun ilaa soddon kun ( 20,000 – 30.000). tababar dheer iyo wacyi gelin ka dib sheekha iyo ciidamadisii u kacay difaaca Diinta iyo dalka,Waxayna la kulmeen hanjbaad iyo hujuum kaga imaanayay dhanka gumeystaha Talyaaniga oo iyagu markaas heestay dhamaan koofurta Soomaaliya iyo Etiopia oo aheyd dalka kali ee Afrika kana qeyb galay qeybsashada dalalka Afirca ee Berlin 1884.
Sheekh Xasan dhag jalaq uma siin dhamaan hanjabaadaas iyo baqdin galintaas kaga imaameysay dhanka Gumeystaha gumeystaha Talyaaniga xiligaasi waxaa Soomaaliya wakiil uga ahaa Jeneral la oran jiray MarioDevechio.
Si kastaba ha ahaatee Sheekh Xasan wuxuu go’aansaday inow la dagaalamo kana xoreeyo dalka diinta kor loo qaado.
Waqtigii ayaa dhamaaday waxaa bilowday dagaaladii fool ka foolka ahaa ee Sheekh Xasan la galay gumeystihii. Sheekha iyo gumeystaha waxay kulmeen marar badan iyagoo dhamaan dagaaladii uu la galay gumeystaha uu halkaasi kaga guuleystay. Waxaana dagaaladii u Sheekha la galay gumeystaha ka xusi karnaa :· Gumar Sheel ( 1905 ) waxa uu ahaa dagaalkii ugu horeeyay ee uu la galay Amxaardii oo markaas isku dayaysay inay la wareegto dhamaan dhulka Soomaaliyeed iyadoo markaas timid Taytayle ( Balcad ). Waxaa jiray dagaalo kale uu Sheekha la galay Ethiopia ilaa markii danbe ay dalka ka baxaan iyga oo dulaysan.
Waxaa kaloo ka mid ahaa dagaaladii uu la galay gumeystaha gaar ahaan Talyaaniga oo aan ka xusi karno :
1. Dagaalkii Buulo Barde oo dhacay 1922.
2. Ceel Dheere 1922 iyo 1923.
3. Hilweyne 1923.
4. Jiliyaale 1924.
5. Hareeriile 1924.
Sheekh Xasan Barsane wuxu ku caan baxay inuu ciidanka ka bar bar dagaalamo isago dhiiri galin jiray una sheegi jiray inay haleyaan Shahaado ama Sharaf Aakhiro iyo Aduunba.
Dagaaladii faraha badanaa ee uu la galay Sheekh Xasan wuxuu ku laayay rag faro badan oo ka tirsanaa gumeystaha oo isugu jiray saraakiil iyo dablay .
Gumeystaha oo ka faa’ideystay maqnaashaha ciidamada Sheekha oo markaas ku maqnaa dagaalo dhinaca Hiiraan ayaa dhabar jabin ka dib waxa ay hareereeyeen xaruntii Sheekha iyagoo adeegsanaaya hubka xiligaa ugu casrisnaa lana yimid ciidan fara baan oo ay ka oo wadeen dhankaas iyo cadan iyo weliba kuwa kale oo ay ka soo ka xeeyeen dalalka kale oo ay gymeysan jireen kuwaas oo ahaa calooshood u shaqeystayaal sida ku cad buugii uu qoray Mario Devechio oo lagu magacaabo ORIZENTO DI IMPERO. Ka bid Sheekha waxaa uu u gacan galay cadowga, waxayna ka dalbadeen inuu ciidamadiisa ku amro inay is dhiibaan, waa uu ka biyo diiday. Si kastaba ha ahaatee gumeystaha ayaa aakhiritankii ku guuleystay inay qabtaan oo ay xabsiga dhigaan Sheikh Xasan Barsane sanadu markay ahayd 1924.
Waxaa Sheekha lagu xabisay xabsiga loo yaqaaney Gaalshiro iyadoo markaasi maxkamada gumeysiga ay ku xukuntay 30 sano oo xarig ah oo ay u dheertahay shaqo adag iyo jirdil. Si kastaba ah ahaatee hadana gumeystaha ayaa ku qanci waayay inay xabisaan oo kaliya waayo Sheekh Xasan Barsane ayaa ahaa caqabadii ugu weyneyd ee ay gumeystaha Talyaaniga kala kulmeyn koonfurta Soomaaliya iyadoo aanba dhihi karno sheekha wuxuu ahaa quwada kali ah ee dagaalo waaweyn kaga hortimid. Talyaaniga ayaa 3 sano ka dib waxay hadana isku dayeen inay dilaan Sheekha iyagoo ay u suuro gashay sanada Markey ahayd 1927 iyado markaasi ay gumeystuhu ku xireen meel god ah oo aan ku filneyn inuu fariisto godkaas ayaa wuxuu lahaa oo kali ah meel yar oo shabaq camal ah oo uu xoogaa wax u neef ah ka qaadan jiray.
Intaas oo kali ah kuma dhaafin ee waxay ugu dareen inay sun ku buufiyaan qolkii uu ku xirnaa waxaana amarkaasi bixiyay KABEELLO sida uu xusay MAXAMED ABDI (Odoyaasha Muqdisho ) oo ka mid ahaa sadexdii Nin ee loo adegsaday inay fuliyaan falkaasi. Ugu danbeyntii Sheekha ayaa ku geeriyooday suntii. Sida ku xusan Orizento Impero iyo TREE ANNI DE IN SOMALIA .Sheekhu wuxuu dhintay taarikhdu mrkey ahayd 13. January 1927. waxaana lagu duugay Qabuuraha Sheekh Suufi oo ku yaalay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya waxaana markii danbe loo qaaday oo uu hada ku aasan yahay degmada JILIYAALE oo markii hore Sheekha xarun u ahayd.
Gumaystaha iyo gaalada calooshada ku shaqeeya waligood way ku soo duuli jiraan gayiga Somaliyeed,wayna jabi jireen ugu danbeyn,waxaana badana ka hortagi jiray tiro yar oo Somalida ka mid ah.waana tan maanta aan aragno, oo gumaysiga cusub meel walba ka soo galay gayiga Somaliyeed,waana laga hortagay,lana hortaagan yahay,waxaana halys la dhigtay Shahaado ama Sharaf,taasoo ragii hore dhamaantood ku howl galeen.alana ku guuleeyay.
Qofkii maanta ka hortaga tariikhda ayaa xusi doonta,sida Imaam Axmed Guray,Sayid Maxamed iyo Imaam Sheekh Xasan barsane,raxiimulaah dhamaantood.
“Maqashiiya Uunka” Sayid Maxamed Cabdille Xasan
Posted on January 1, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Waa mar kale iyo taxenihii ahaa “rag waa raggii hore, hadalna waa intuu yiri” Waxaan moogan soo qaadanaynaa geeraar uu mariyey Sayid Maxamed Sheekh Cabdille Xasan.
Heshiiskii Illig Daldala ee dhexmaray Daraawiish iyo gumaysiga, Talyaani iyo Ingiriis, 1905tii ka dib waxay Daraawiishi goosatay inay ka shaqayso sidii Soomaalida looga dhaadhicin lahaa khatarta iyo khayaanada gumaysiga, loogana digi lahaa dhuxdhuxlayaasha u adeega gumaysiga. Wufuud iyo culimo dadka soo wacdida ayuu Sayid Maxamed afarta baynu jahaba u diray. Wuxuu faray inay degaan walba tagaan Soomalidana ku waaniyaan inaysan gumaysiga gacan siin, diintooda iyo dalkoodana ka difaacan gardarada aan geed loogu soo gaban ee Ferenjiga. Culimadaa waxaa ka mid ahaa Cabdalle Shixiri iyo Xirsi Afdiir oo uu u diray degaanka qaarkii.
Nimankaasi kolkii ay ambabaxayeen ayuu geeraar fariin ah Sayidku mariyey. Wuxuu yidhi:
Cabdalla maan qaboobiyo
Xirsi maakib laawow
Mid yar waxad tidhaahdaan
Murtidiinta Reer Hebel
Mariya weedha aan idhi
Masafadayda ula taga
Miyir inuu ku soo galo
Mid mid waxow tidhaahdaan
Nimanka mooradii furay
Ma wax laysku maagaa?
Jahaadka mooshinkii galay
Ma wax laga maqnaadaa?
Mushahaaro been ahi
Ma wax lagu magaagaa?
Ma lays moogadeeyaa?
Nin gaal u midiidimay
Mici naar inuu geli
Kutubtaa u maragee
Ma wax laga murmaabaa?
Mushrik inaad jeclaataan
Amaad mudan ku sheegtaan
Hadaydnaan mujrim ahayn
Masalo maad u haysaan?
Meel daran idiin diray
Labadaa meeris ee kore wuxuu ku ridayaa wadaadadii Soomaalida ku wacdiyey inaysan haynin tabar ay gumaysiga kula diriraan, hubkiisa mid u dhigmana aanay wadanin. Waxay yidhaahdeen nin kaa xoog badani hortaa ayuu xanaaqaa sidaa awgeed Ferenjiga haynagu carinina. Wadaadadaa ayuu dhaliilayaa.
Idinkaa ka maagtoo
Macbuudkii Rabbi ahaa
Idinkaa ka maarmoo
Muminimada laabta ah
Kufriga idin mahoobiyey
Waxse mawtigiin galay
Ama malag idiin yimid
Malcuun uri ka raacdeen!
Mid kaleeto waxay tahay
Waxaan maqalay Ferenjigu
Inuu miiri idiin qoray
Raciyad ama ‘riders’, Soomaaliduna u baddashay Rayad kuwaas oo ahaa qabaa’il Ingiriisku hubeeyey si uu isaga xijiyo gumaca Daraawiish iyo qabaa’ilka kale ee kasoo horjeeday gumaysigiisa ayuu u dan leeyahay. Ingiriis ayaad dabadhoon u noqoteen ayuu ku canaantay.
Waxaan maqalay maalkii
Inuu idinka meersaday
Waxaan maqalay ooryaha
Mitan inaad ka waydeen
Waxaan maqalay madaxdiina
In madiidin laga dhigay
Oon miis yar mooyee
Maydho geel la siinayn
Waxaan maqalay maahyahow
Magiciin inuu bay
Niman Soomaali ah oo gumaysiga guno ka qaadan jiray una shaqayn jiray ayuu meerisyadaa kore ku halgaadayaa.
Intaasoo masiiba ah
Waxaa igala maad badan
Maska iyo abeesada
Magta aad ka bixisaan
Aydaan midigta fidinayn
Aar hadduu ku micyeyn
Lixda meeris ee u dambeeya waxay ka hadlayaan xukun Ingiriisku kusoo rogay gobolada waqooyi kaa oo ahaa inaan dhirta la goynin, duurjoogtana la dilin. Ninkii lagu arko ama lagu maqlo inuu laan gooyey ama duurjoogta wax ka dilay waa la xidhi ama waa la ganaaxi. Soomaalidii miyiga ku noolayd, sidii ay doonaana u isticmaali jiray ayuu xukunkaasi dhibay. Sayidkuna xasaasiyadaa ayuu ka faa’iidaysanayey.
Geeraaro iyo gabayo heshiiskan iyo geerarkan la socda ayaan soo wadnaa. Ha u daymo la’aan.
Sheekh M. C. Geelle: Agoon Xoolo kama Dhicin, Xarga-goysna Maan Noqon, Eexana Rag Kama Gelin; Maxaa Leygu Soo Xiray?
Posted on November 30, 2012 by Voice Of Somalia Standard
Akhristayaal Soomaali maryoolay markay lahaayeen xornimaan qaaddannay kaddib waxay kor u qaadeen fankooda ilaa hal-abuurradu ku muujiyaan in dambiga ugu daran ee la galo yahay gaalnimo iyo wax la xiriira duminta Shacaa’irta Islaamka. Maaddaama heesaha jacaylka aad loo jeclaa baa hal-abuurradu Caqiidadaas saliimka ah noo hoos gelin jireen! Waxaa ka mid ahaa maansadoodii:
Sidaan ahay nin gaaloo
Gubey maalin Ciideed
Lagu soo Gurmaday baad
Gebi dheer i saartood
Igu Goonni baartee
Guur hayga filanine
Gurigeyga ii dhaaf!
Hal-abuurkaasi wuxuu ka dhigayaa in haweentaasi ninkaas u gashay si aan loo gelin qof Muslim ah ee ay ula dhaqantay sidii nin gaal ah oo weliba maalin Ciid ah inta Xaramka galay gubay! Bal u fiirsada sida hal-abuurku isu saaray gaal weliba maalin xurmo leh oo ciid ah (Yomul Akbar/Adxaa), Xaramka dhexdiisa gubay! Mid kalaa yiri:
Ma deyrkii Makaan gubay?
Sida xaqiiqda ah, hadda waxaad moodeysaa in dambiga ugu daran ee la galo yahay in Salaad Subax jamaaco ku soo tukato ama lagaa maqlo adoo Kitaab Qur’aan ah heysta oo leh: waxaan rabaa in Isaga la isku xukumo ama Jihaad ka hadlaya! Gaalo-raacnimada iyo gaaloobiddu waa waxyaalaha lagu noqdo madaxweyne ee la isku soo dhoweeyo! Miyaadan arag Soomaali kummannaan ah oo gashan funaanado ay ku sawiran yihiin Feysal Cali Waraabe iyo Siilaanyo oo dimuqraadiyad u damaashaadaya oon cidna saas u fiirineyn halka sheekh Maxamuud C/Laahi Geelle oo keligiis ah oo Kitaab Qur’aan ah gacanta ku wata oo leh: Isagaan doonayaa; loo dul qaadan waayey inuu fikirkiisa dhiibto! Soow lama oran dimuqraaddiyaddaa ogol in qofku fikirkiisa dhiibto? Haddaad idinku wadataan funaanado ay Siilaanyo iyo Ina Cali Waraabe ku sawiran yihiin; maxaa sheekha loogu diidayaa Kitaabkuu wato? Dagaal ma soo sameyn! Cid ma soo wadan! Dhagax ma tuurin!
Waxaan xasuustaa meel kubbad lagu ciyaarayo, nin dhallinyaro markaas ahaa oo la oran jiray Maxamed-Soomaali oo Waqooyi ka soo jeeda oo inta sigaar soo baxshay wiil yar ku leh: been beeneey iisoo shid! Cunigii isagoon isu qabin in amar la siiyey buu xaafadihii ka ag dhowaa la aaday sigaarkii suu ugu soo shido! Hadda ma la waayey shacab been beenay isu soo agaasima oo dhaha: dimuqraaddiyaddaa ogol in qofku qowlkiisa dhiibto; ee annaguba funaanadihiinnaan gashannee, Siilaanyoow sii daa wadaadka!
Haddii wadaadku dibad-bax sameyn lahaa ama soo wadan lahaa dad dhagxaan iyo wax tuuraya waxaa la is dhihi lahaa Siilaanyo marmarsiyuu heystaa laakiin sidaad cinwaanka ku aragtaan mar la xiray Cabdi-qeys baa la sheegaa inuu tirshay hees ay ku jirtay tuducyadaas haddaanan khaldaneyn:
Agoon xoolo kama dhicin
Xarga-goysnna maan noqon
Eexana rag kama gelin
Soomaali laga xaday
Haddii aan xaggaa tagay
Ma shiddeynin xeerkee
Maxaa laygu soo xiray?
Haddaba Siilaanyo wuxuu leeyahay Somaliland dimuqraadiyad baa ka jirta! Hadday arrintu saas tahay, waxaad tiraahdeen qofku codkiisa waa dhiiban karaa dabadeedna sheekh Maxmauud C/Laahi Geelle wuxuu yiri waxaan rabaa Shareeco-isku-xukun; marka maxaa lagu xiray?
Waxaa maamulka Somaliland laga codsanayaa in sheekha la siiyo xorriyadiisa! Ma jirto wax dambi ah oo uu galay! Haddii kale ku qorta dastuurkiinna inaan la rabi karin Shareeco Islaam! Muslimiintu waa yaqaannaan in rooti qaali noqday oo loo bannaanbaxo! Waa yaqaannaan in iyagoo gashan funaanad Siilaanyo ku sawirran yahay u bannaan baxaan xisbi dimuqraadi ah (Kulmiye) ama UCID (kan ina Cali Wareebe) laakiin ma ogola inay ka bannaanbaxaan arrinta sheekh lagu heysto: maxaad u wadataa Kitaabka Qur’aanka ah! WALLAAHI dad badan bay la tahay wax sahlan laakiin haddii shacabku arrintaas ka hadli waayaan waa arrin weyn! Haddii dhulka nalala gooyo; maxaan ku cududaaraneynnaa? Wadaaddo ma heynnee meeye hal abuurradii hadalkaas kore ku hadli jiray?